Roses uye akasimuka kutarisira vatangadzi - ruzivo rwekurima
Kudyara nguva ndekwako
Rosi inotemwa chete mushure memvura yechando
Biological pest control uye mavara akasiyana-siyana nemaruva
Kune miti shoma shoma inowanikwa mumhando dzakasiyana-siyana dzemarudzi akasiyana-siyana, akadai se "queen queen", rose. Mhando dzakawanda dzemaruva emunda wekumba ndezvimwe kana zviduku zvakakura zvinomera zvichikwira mamita akakwirira.
Rosa kutarisira vatangadzi - saka zviri nyore kutarisira kwemaruva
Pano, kusiyana kunoitwa pakati pemarudzi akasiyana nemarcemes kana inflorescences yeavo vanoita maruva rimwe chete pfuti rimwe nerimwe. Izvozvo zvakasiyana uye iyo mararamiro aunosarudza ainyanya nyaya yekuravira.
Roses mumunda we rose
Zvinonyanya kukosha, mazhinji emaruva aya akanaka anosarudza nzvimbo ine zuva. Izvi zvinoshandawo kune kukwira roses, iyo iwe unogona kukomberedza rusvingo rweimba kana kuti kunyange trellis zvakanaka.
Iko kukanganisa pamusoro pekusimudzira rose
Kusiyana nemafungiro akapararira kuti roses ane hanya zvikuru, vari nyore kwazvo kutarisira. Izvi ndezvechokwadi kunyanya kune vanoita zvekurima varimi vanodikanwa kufarira maruva akanaka uye kukura kukuru. Kune vakweta, zvechokwadi, zvinoratidzika zvakasiyana.
Kana iwe uchida kuva nebasa shoma sezvinobvira ne "mambokadzi wemaruva", sarudza mhando dzakanaka dzechando kumunda wako pachako. Iro rakanaka roses rakatsvuka rinowanzotarisana nechando, izvo zvinonyanya kuitika kune veChirungu.
Nguva yakanakisisa yekusima roses ndeyekuvhuvhuta. Kana uchida kunakidzwa nemaruva ako kwemazuva mazhinji, unofanira kuazvitenga mumunda wakatarwa, zvichida pasina pombi. Usati waisa pasi, ivhu rinofanira kunge rakagadzirirwa zvakanaka.
Zvinonyanya kukosha kusunungura chikonzero chakakwana kwazvo nokuti roses inoumba midzi yakareba. Uyu mamiriro ezvinhu achabatsira rimwe gare, nokuti munhu haafaniri kunwisa miti nguva dzose kunyange mumvura yakaoma.
Iwe unofanirwa kudiridza roses pakuwa kwete, Ikozvino kuumba maruva maduku kunogona kupisa munguva yechando uye kukurudzira chishuvo kukanganisa kumiti.
Mushure mekudyara zvakakwana kuti uunganidze ivhu zvishoma uye mvura zvakanaka. Nenguva yechando iri pedyo nekona, mari yechando inonzi roses inofanira kuchengetedzwa kubva kune chishuwo chakaoma. Pano, zvakadaro, zvakakwana kuvhara ivhu rakapoteredza trunk ne bark mulch kana mapazi emuFir, anenge masentimita gumi kumusoro.
Inoberekwa chete mumwaka wegore. Zvigadzirwa zvehupenyu zvakakosha zvakakonzerwa nekuiswa muvhu rakapoteredza muti
Pamberi pacho, roses inoda kutemwa kwegore negore, asi kana nguva yechando ichizoguma. Zvinokosha kubvisa zvose zvakasvibiswa uye matanda ematanda.
Mukuwedzera, shiteni imwe neimwe inofanira kupfupiswa kuitira kuti kubva pasi chete "maziso" maviri, kureva kuti kuwedzera kubva kune mapazi matsva kukura, kunoonekwa.
Iyo inopera isina kutaura kuti iyo yakananga uye yakanaka kuchekerera shears inodiwa kuti ibudirire nzvimbo dzinononoka dzakatemwa. Kana zvisina kudaro fungi nezvimwe zvipembenene zvinogona kuwanikwa pano.
Muzhizha unogona kunakidzwa nekushambadzira kusingagumi. Kana zvichidikanwa, unogona kusimudzazve kusvikira munaJune uye zvichida ude kune dzimwe nguva, asi tapota kwete kumadekwana uye kubva kumusoro!
Matonhwe emvura mumaruva uye pamashizha muzuva rezuva anokwanisa kutungamirira kusingaoneki kupisa pamiti.
Uye avo vanotya kudyara zvinomera zvinongodyara lavender munharaunda iri pedyo: haisi kutengesa chete aphids nekunhuhwirira kwayo, asiwo inogadzira Medecent accents.
Uri kutadza ruzivo, uri kutsvaga tsanangudzo chaiyo here? Taura nesu.
Garden Ideas - Kutumira ne roses
Coloring page shiri uye roses
Bindu - kugadzira michero uye zvekuzorora